XOG:- Fahad Yaasiin oo booqasho qarsoodi ah ku tegay Itoobiya iyo Abiy Axmed oo diiday qorshe uu watay Agaasimaha NISA - Ceeldheer News: Somalia News Update
Ilo-wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa u sheegay in Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka Qaranka ee NISA, Fahad Yaasiin dhawaan booqday qarsoodi ah uu ku tegay Caasimadda dalka Ethiopia ee Ethiopia, isagoo Kulan Khaas ah la yeeshay Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed Ali.
Kulankooda ayaa lagu lafaguray Qalalaasaha ka aloosan Muqdisho, iyadoo Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia ku gacan-sayray Codsi ku aadanaa in Ciiddan ka tirsan ENDF loo soo daabulo Muqdisho.
Fahad Yaasiin oo jaal dhow la ah Madaxweyne Farmaajo, horeyna u ahaa Saxafi ka tirsan Telefishinka Aljazeera waxaa la sheegay inuu maalintii Isniintii ee la soo dhaafay u dhoofay Ethiopia, si uu RW Abiy Ahmed u gudbiyo codsiga ku aadan in ay Ciiddamo u soo diraan Somalia.
Sida xogta lagu ogaaday Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ka cuddur-daartay arrintaasi, wuxuuna Fahad Yaasiin kula taliyey in Somalia dib loogu celiyo Doorasho.
Agaasimaha Hay’adda NISA waxa uu dib ugu soo laabtay Muqdisho, kadib, markii uu Abiy Ahmed ka Biyo diiday inuu Ciiddamo taageera DFS loo soo daabulo Muqdisho.
Diidmadaasi ayaa ku soo beegantay iyadoo ay Ciiddanka Difaaca Ethiopia (The Ethiopian National Defense Force (ENDF) dagaal culus kula jiraan KooxdaTigrayga ee Tigrey Defence Force (TDF) ee ka dagaalanta Gobalka Tigrayga ee Waqooyiga dalkaasi.
Kumanaan Askar Ethiopian ah ayaa ku sugan qeybo ka mid ah gudaha Somalia, kuwaasi oo ay qeyb ka tirsan yihiin Hawlgalka AMISOM, halka kuwo kalena ayka madax bannaan yihiin AMISOM.
Kulan laga yeeshay Amniga gobolka Bari